Waddan Shaqada Ciidannimo Ka Caydhinaya Askarta Buurbuuran Ee Caloolaysta, Xeerarka Ay Jabiyeen Iyo Tirada La Eryayo - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Waddan Shaqada Ciidannimo Ka Caydhinaya Askarta Buurbuuran Ee Caloolaysta, Xeerarka Ay Jabiyeen...
Wakaaladda wararka Interfax ee fadhigeedu yahay caasimadda waddanka Ruushka ee Moscow ayaa baahisay warbixin xiiso badan oo ka hadlaysay waddanka Tajikistan oo shaqada ka caydhinaya in ka badan boqollaal askari oo kaliya waxa ay shaqada ku waayayaan tahay in ay yihiin askar buurbuuran ama cayilan. Khamiistii aan soo dhaafnay ayaa afhayeen u hadlay wasaaradda Arrimaha Gudaha ee waddanka Tajikistan waxa uu daboolka ka qaaday in ku dhawaad dhawr boqol oo askari iyo toban sarkaal oo sarsare oo ciidamada ka mid ah la soo diiwaan geliyey kuwaasi oo ah askar buurbuuran oo miisaanka jidhkoodu weyn yahay kadibna loo sheegay in shaqada laga eryay iyaga oo ku eedaysan in ay ilaalin waayeen ama la socon waayeen Miisaanka Jidhkooda oo ay noqdeen askar buuran oo caloolaystay.
Sidoo kale Masuul u hadlay wasaaradda Gaashaan dhigga waddanka Tajikistan ee ku yaalla badhtaha qaaradda Aasiya ayaa wakaaladda wararka ee Interfax waxa uu u sheegay in saraakiishaasi ciidamada ka mid ah lagu helay in ay jabiyeen xeer ka mid ah qodobada u yaalla shuruucda ciidanka ee dalkaasi oo ah in aanu askarigu noqon mid buuran jidh ahaan oo cayilan haddii kale shaqada ciidanimo laga eryayo kuwaasi oo dhammaan noqday kuwo ka batay miisaankoodu intii sharci ahaan loo ogolaa.
Ciidamadan ayaa ku fashilmay in ay la jaan qaadaan barnaamijka ilaalinta quruxda iyo caafimaadka jidhka ciidamada oo ah barnaamij lagu daryeelo ciidamada oo ah mid loogu sameeyo jimicsiyo gaar ah iyo la socodka dhinaca cuntada ay qaataan askartaasi. Waxaana ka mid ah in askarta la eryo subax walba in ka badan 5 Kiiloo Mitir saddex jeer toddobaadkiiba.
Jamhuuriyadda Tajikistan oo ku taalla Asiyada dhexe ayaa ka mid ahayd jamhuuriyadihii Midawga Soofiyeti, dadka ku noolina ay dhan yihiin in ka badan 8 Malyuun oo qof ayaa waxa ay leeyihiin xirfad dhinaca ciidamada ah oo aad u sarraysa iyaga oo tix geliya qawaaniinta askarta u taalla. Madaxweynaha dalkaasi oo lagu magacaabo Imaam Cali Raxmaanoof (Ali Rahmanov) oo xukunka dalkiisa hayay in ka badan labaatan sano ayaa saxeexi doona qorshahan lagu ruqsaynayo ciidamada buurbuuran.
Xaddiga Miisaan ee loo oggol yahay Miisaanka jidhka ciidamada dalkaasi Tajikistan waa in aanu askarigu ka cuslaan ugu badnaan 75 Kiiloo Garaam iyo in aannu haba yaraatee lahayn wax calool ah ama xaydh ah.